Xaaf iyo Madaxwayne Qoorqoor oo lagu wado in ay kulmaan saacadaha soo socda. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeSomali NewsXaaf iyo Madaxwayne Qoorqoor oo lagu wado in ay kulmaan saacadaha soo socda.
Xaaf iyo Madaxwayne Qoorqoor oo lagu wado in ay kulmaan saacadaha soo socda.
March 24, 2020 marqaan Somali News 0
Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa aqbalay in uu kulmo Madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ka dib markii maalmihii lasoo dhaafay ay waddeen Waxgaradka dadaallo lagu xalinaayo Khilaafka.
Xubno ku dhow Madaxweyne Xaaf ayaa xaqiijiyay in Qoor Qoor uu Gaalkacyo ku tagi doono booqasho uu kulmaya Madaxweyne Xaaf oo halkaasi ku heysta Xildhibaano, Madaxweyne ku xigeen iyo xubno ka mid ah Golihii Wasiiradda Galmudug.
Madaxweyne Xaaf ayaa aqbalay in la xaliyo Khilaafka, islamarkaana ay garwadeen ka noqdaan xubno ka mid ah Waxgaradka Galmudug.
Guddoomiyaha Guddiga qaban qaabada Xaflada Caleemo-Saarka Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Galmudug Yuusuf Garaad Cumar oo maalmahaan socdaal ku marayey deegaano ka tirsan Galmudug ayaa Magaalada Gaalkacyo waxaa uu kula kulmey Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle xalay.
Kulanka ayaa waxaa ay labada dhinac uga wada hadleen dhacdooyinkii horey uga dhacay Galmudug kuwa weli taagan ee xalka u baahan iyo Arrimo badan oo ku saabsan xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya.
Aby Ahmed oo dalbaday 150Bilyan si Africa looga difaaco Coronavirus.